यस साता नेप्सेमा ६ कम्पनीको शेयर सुचिकृत, कसको कति ? – Insurance Khabar
यस साता नेप्सेमा ६ कम्पनीको शेयर सुचिकृत, कसको कति ?
प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७८, शनिबार १२:३३
काठमाडौं । यस साता नेप्सेमा ६ वटा कम्पनीको शेयर सूचिकृत भएको छ । नेप्सेमा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको १५ प्रतिशत बोनश बापतको १५ लाख ८ हजार एक सय ५० दशमलव ३६१८ कित्ता शेयर सूचिकृत भएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ३१ प्रतिशत बोनश बापतको एक करोड ७० लाख ३८ हजार ९८ दशमलव ५१ कित्ता शेयर सूचिकृत भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई ३१ प्रतिशत बोनश शेयर र २० प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनका लागि) गरि कुल ५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त लाभांश कम्पनीको बीसौँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको ८.८० प्रतिशत बोनश बापतको २७ लाख ३ हजार ४ सय १३ दशमलव ९६ कित्ता शेयर सूचिकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरुलाई ८.८० प्रतिशतले हुन आउने बोनश शेयर र बाँकी ०.४६ प्रतिशतले हुन आउने नगद (कर प्रयोजनार्थ) गरी कुल ९.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत बोनश बापतको १० लाख ५६ हजार २ सय ७४ दशमलव ८४४ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनश शेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५३ प्रतिशत नगद गरि कूल १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गरेको विभिन्न ५ वटा विकास ऋणपत्र नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । जसमध्ये, २०८४ “घ“ को १० अर्ब, २०८३ “ग“ को १० अर्ब, २०८४ “ङ“ को १० अर्ब, २०८५ “घ“ को १० अर्ब र २०८५ “ङ“ को १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र सूचिकृत भएको हो ।
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको ५० प्रतिशत हकप्रद बापतको ५२ लाख ४१ हजार एक सय ९७ कित्ता शेयर सूचिकृत भएको छ ।